नुवाकोट कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोइलो « Lokpath
१० असार २०७९, शुक्रवार
नुवाकोट कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोइलो
“कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन , यदी कांग्रेस हार्छ भने कांग्रेसको कारणले हो ” स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भाषण गर्ने कुनै पनि चुनाबी सभामा यो वाक्य छुट्दैनथ्यो । अहिलेपनि कांग्रेस यही समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा जहाजहा कांग्रेसले पराजय भोग्यो अधिकांश ठाँउमा अन्तरघातको सवाल उठिरहेको छ । अझ धेरै केन्द्रियस्तरको नेताहरु भएको जिल्ला नुवाकोटमा त यतिवेला अन्तरघातको विषय सार्है पेचिलो बनेको छ । प्रकृतिक नियम नै हो आफ्नो कमजोरीले भन्दापनि अरुलाई दोष लगाउदै आनन्द मान्ने । स्थानीय निर्वाचनमा पराजित कांग्रेसका उमेद्वारहरु यतिवेला अन्तरघात भएको भन्दै जिल्लादेखी केन्द्रसम्म हारगुहारमा छन् । कोहीसँगपनि असहयोग गरेको कुनै प्रमाण छैन केबल आफु विरुद्ध यो हो की भन्ने शंकाको भरमा नाम पोल्दै पाटीको आन्तरिक गतिरोधलाई छताछुल्ल पार्न अभ्यस्त छन् ।स्थानीय निर्वाचन र अन्तरघातको रोइलोसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नुवाकोटको तिनवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्यो । भने समानुपातिकमा दुई जना अन्य सांसदपनि मनोनित भएसँगै नुवाकोट कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेपनि व्यवस्थापिका संसदमा पाँच जना संसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा अर्जुन नरसिंह केसी, डा.रामशरण महत, डा. प्रकासशरण महत , बहादुरसिंह लामा र जगदिश्वर नरसिंह केसी रहेका छन् । यि पाँच नेताको आआफ्नै किसिमको वर्चश्व जिल्लामा रहेको छ । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक नेताले आफु नजिककालाई टिकट दिनखोज्नु स्वभाविक थियो र हो पनि । तर यत्तिसम्म पनि भयो कि एउटाले आधिकारिक भनेर उमेद्वारी दर्ता गराइसकेपछि पुन पाटी केन्द्रिय सभापतिको हस्ताक्षरको टिकट ल्याएको भन्दै अर्को उमेद्वारी दर्ता भई त्यसैले आधिकारिकता पाउने परिस्थिती बन्यो । त्यसपछि विभिन्न ठाँउमा भएको चुनाबी सभामा नेताहरु भएर भोट माग्ने र आन्तरिक किचलो अन्त्य भएको उद्घोषपनि भयो । जहाँ जहाँ कांग्रेसले विषय हासिल गर्यो त्यहा अन्तरघातको रोइलो सुनिन्न भने जहाँ जहाँ कांग्रेसले पराजय भोग्यो त्यहात्यहा अन्तरघात भएको भन्दै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसले चुनाबी खर्च भन्दै केही रकम दिए र फिल्डमा पाटीको विरुद्धमा नै गतिविधी गरे तिनको अन्तरघातमा लिस्टमा नाम छैन । जोसँग उमेद्वार बनेकाको केही दुश्मती थियो अधिकांश अन्तरघात गर्नेको लिस्टपनि त्यस्तै किसिमको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तिटवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्दा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी थिए । र अहिलेपनि उनै केसी कांग्रेसको जिल्ला सभापति छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हारेर चर्चामा रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका र विदुर नगरपालिका हो । यहाँ कुनै नेताले भन्दापनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताबिचको मतभेदलाई उमेद्वार र नेताले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र पराजयको प्रमुख कारण हो ।
तिनवटै क्षेत्रमा विजय हासिल गर्दा उही नेतृत्व सफल अहिले उही अन्तरघाती !संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तिटवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्दा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी थिए । र अहिलेपनि उनै केसी कांग्रेसको जिल्ला सभापति छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हारेर चर्चामा रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका र विदुर नगरपालिका हो । यहाँ कुनै नेताले भन्दापनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताबिचको मतभेदलाई उमेद्वार र नेताले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र पराजयको प्रमुख कारण हो । ५० आँै वर्षदेखी पाटीको लागी काम गरेकाहरुले अपेक्षित अवसर नपाउनु नैरास्यताको कारण थियो भने तिनै निराश व्यक्तिहरु तथष्ठ बसिदिँदा जनताको भोटमा यताउता भएको देखिन्छ । भने अर्कोतर्फ टिकट ल्याउनुमै जित र हारको नाटक मञ्चन भइरहदा विजय निम्ति आवश्यक तयारी नै केही क्षेत्रमा नपुगेको अर्को यथार्थपनि उत्तिकै हो ।प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनमा पनि आकांक्षी नै धेरैपछिल्लो क्षेत्र निर्धारण अनुसार केन्द्रको लागी नुवाकोटमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ भने प्रदेशको लागी चारवटा निर्वाचन क्षेत्र । केन्द्रिय स्तरका चारजना नेताहरु केन्द्र निर्वाचन लड्ने मनस्थितीमा देखिन्छन् साथै संसद जगदिश्वर नरसिंह केसिको आकांक्षा देखिन्छ । भने प्रदेशमा पनि रमेशकुमार महत, प्रतापसिह लामा, अर्जुन न्यौपाने लगायत धेरै आकांक्षी छन् । प्रत्येकलाई व्यवस्थापन गर्दै विजयको सुनिश्चित आधार तयार कसरी होला यो नै पेचिलो विषय छ ।
हरेक समय केसी खेमाको नुवाकोट काग्रेसमा वर्चश्व रहदै आएको थियो । तर गएको महाधिवेशनपछि भने केसी खेमा अली कमजोरजस्तो देखिएको छ । त्यो पनि महत खेमा बलियो भएर होइन नुवाकोट कांग्रेसमा बहादुरसिंह लामाको उदय । लामाले महत खेमालाई समर्थन गर्ने र केही नुवाकोट कांग्रेसको विवादमा देउवाले प्रकाशशरण महतको समर्थन लिइदिदा केसी खेमाको अली कमजोर हो की जस्तो देखिन्छ ।
आरोपप्रत्यारोपले प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनलाई धक्का!नुवाकोट कांग्रेसमा अहिले देखिनेगरि दुईवटा खेमा छ । लाग्न सक्छ संस्थापन र पौडेल पक्ष तर नुवाकोट कांग्रेसको राजनीतिमा अलि फरक अवस्था छ । केसी र महत खेमामा विभाजित नुवाकोट कांग्रेस राजनीति यतिवेलापनि भुसको आगो झै भित्रभित्रै ठूलो द्वन्दमा छ । खेमाको हिसाबले डाक्टर रामशरण महत पौडेल खोमामा छन् भने अन्य सबै नेता देउवा क्याम्पमा नै छन् । हरेक समय केसी खेमाको नुवाकोट काग्रेसमा वर्चश्व रहदै आएको थियो । तर गएको महाधिवेशनपछि भने केसी खेमा अली कमजोरजस्तो देखिएको छ । त्यो पनि महत खेमा बलियो भएर होइन नुवाकोट कांग्रेसमा बहादुरसिंह लामाको उदय । लामाले महत खेमालाई समर्थन गर्ने र केही नुवाकोट कांग्रेसको विवादमा देउवाले प्रकाशशरण महतको समर्थन लिइदिदा केसी खेमाको अली कमजोर हो की जस्तो देखिन्छ ।
अबपनि नुवाकोट कांग्रेस अन्तरघातको नाममा रुमलिइरहने हो भने प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनपनि अन्य पाटीलाई अपुताली नपर्ला भन्न सकिन्न ।
टिकटका लागी अन्तिममा टिकट जसले पायो त्यसलाई सहयोग गर्नु हरेक कार्यकर्ताको दायित्व हो । अन्तरघात प्रमाणित गर्नको लागी पनि त्यसको आफ्नै किसिमको अनुसन्धानातमक शैली हुन्छ । न त बागी उमेद्वारी दिएको छ , न विपक्षी उमेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक न त विपक्षी उमेद्वारलाई सहयोग गरेको कुनै प्रमाण नै । केबल विवादमाथी विवाद सिर्जना गर्न खोज्नु हार्नेले सान्त्वना लिनु शिवाय अन्य अर्थ राख्दैन । पाटीको सबै तह र तप्का सक्रिय नभएको , टिकट नपाउनेले सक्रियताको साथ प्रचारप्रसारमा नलागेको देखिन्छ तर त्यसैलाई अन्तरघात मान्ने हो भने त अहिले उमेद्वार बनेकाहरु चुनाबको दिन भोटहाल्नमात्र अन्य निर्वाचनमा गएको उदाहरण छ । अबपनि नुवाकोट कांग्रेस अन्तरघातको नाममा रुमलिइरहने हो भने प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनपनि अन्य पाटीलाई अपुताली नपर्ला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति: २०७४,भाद्र,३०,शुक्रवार १२:५६
पालिका उपप्रमुखको काम के हाे तपाईँलाई थाहा छ ?
काठमाडाैं । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको आफ्नो छुट्टै भूमिका रहेको हुन्छ । उनीहरू पनि जनताबाटै प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर
हेर्नुहोस् प्राकृतिक विश्व फोटोग्राफी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट तस्बिरहरू
काठमाडौं । विश्वभरिका फोटोग्राफरहरूले न्याचुरल वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। पृथ्वीको जीवन र हाम्रो ग्रहमाथि रहेको जोखिम देखाउने
यसरी बनाउँछन् स्थानीय तहले बजेट !
काठमाडौं । नेपालमा रहेको तीन तहको सरकारमध्ये संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट ल्याइसकेका छन् भने
मेयर सा‘प पुँजीपति मात्र होइन विद्यार्थी पनि अनसनमा छन् है !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) बुधबार खुमलटारमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय परिसरमा पुगे । पुँजीबजारको सुधारको
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा खड्का
पोखरा महानगरको बजेट रु आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख
९९ लाख ९९ हजार ९९९ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा
राखेपकाे लेखा तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिम काठमाडाैंमा सुरु
पुतलीसडकमा ‘डक एण्ड डोरिस रेष्टुरेन्ट’ संचालन, प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन
धरानकाे बजेट एक अर्ब ६८ करोड, मेयर कोषमा १ करोड…
जनकपुरधामको बजेट एक अर्ब ८० करोड : चालुतर्फ १ अर्ब…
धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ८३ करोडको बजेट
घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट दुई अर्ब ३२ करोड ९० लाख